हल्का आँखा राता छन् । निद्रा नपुगेको छर्लङै अनुहारमा देख्न सकिन्छ । आँखा टल्पल पनि छन् । धेरै दिनको थकानले शरीर गलेको देखिन्छ । इस्टकोट धुने ब्यबस्था मिलेको देखिन्न । आँसु जसोतसो थामिएका छन् । खस्दा होलान् कतै एउटा कुनामा । सबैको सामु खस्न मर्द हुनुको मर्यादाले नदिएको होला । मनको बेग त आँखामा झल्किन्छन् नै । भाद्गाउँले टोपीमा दुइटा खुकुरीका बुट्टा एक आपसमा क्रस गरेका छन् । ती कुदिएका खुकुरीका चित्रले जिन्दगीका बिभिन्न परिबन्धको निर्णय जस्तै संकेत गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ । निर्दोष चेहरा, शान्त स्वभाव र सरल जीवन उनका बिशेषण हुन । नेपालको बिकासको नक्सामा नअटाएको कुनै पश्चिमको कुनाबाट आएका छन् आफ्नी जहानको उपचार गर्न । आफ्नी जहानको मृत्‍युको दोसाँधमा निर्णय गर्न उनलाई भनिएको छ । मेसिनमा राख्ने कि अवस्था गम्भिर तथा क्षिण भएका कारण घर लिएर जाने । कति अमानवीय र सम्बेदनाहीन मानेका होलान् ति बुवाले मेरा शब्दहरु त्यतिबेला !
हरेक दिन घटनाक्रममा कठिन निर्णय लिने गरिन्छन् । त्यसको साक्षात्कार गर्दै बिभिन्न परिस्थितीहरु नजिकै बाट नियाल्ने अनुभव हुन्छ चिकित्सक हुनुको नाताले । लामो करिडरमा दौडिरहेका बेलामा कारीडरका छेउछाउमा पल्टिरहेका बिरामी कुरुवाहरु देख्न सकिन्छ । मलिनता नाप्ने यन्त्र हुने हो भने फरक फरक मापन गर्न सकिन्थ्यो । सबै कुनै किसिमले मलिन छन् भन्नेमा सन्देह छैन । लाम्खुट्टेले उठिबास नै लगाउँछन् । त्यसैले होला त्यो परिसरबाट हिँड्दा लाम्खुट्टे धपाउने धुवाँको गन्धले नाक जिस्काइरहन्छ । लम्पसार पल्टिरहेका बेलामा भर्खर आँखाका परेली टाँस्सिन खोजेका हुँदा हुन् । अपर्झट भित्रबाट बुलावट हुन्छ ” ५ नम्बर ” हिरा माझीको मान्छे । जिउ पूरै भारी भएकोले होला निकै अप्ठेरोसाथ उठ्छन ति बुवा । दिनभरी कुदेका छन् । कहिले यो औषधी कहिले त्यो जाँच । कहिले घण्टा घण्टामा औषधी थपिने गर्छन् । ठूलो अस्पतालका कुना कुनाका कोठाहरुमा चहार्दा चाहार्दै दिन बितेको हुन्छ । फार्मेसीको लाइन, काउन्टरको लाइन आदि सबैले थकान बढाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले होला ति बुवाले भनेका थिए ” म्याराथन डौडिन भन्दा गार्हो यो दौडधुप । “ म्याराथनको त बाटो सिधा हुन्छ । पुरस्कार पनि प्राप्त हुन्छ । तर यो मनमा पीडाभरिएको अवस्थामा सिधा बाटो पनि रणभुल्ल हुन पुग्छ । त्यस्माथि छरिएका काउन्टरहरु ” क्यास काउन्टर पूर्वमा ,फार्मेसी उत्तरमा ,ल्याब ४०० मिटर पारीको भवनमा आदी । “ अनि हरेक पाइलामा पैसाको खाँचो । पैसा अभावको पीडा यस्तै काउन्टरमा गनी गनी दिँदा पत्तो पाइन्छ ।
केही बेरमा औषधी लिएर आउँछन ति बुवा । र आफ्नो जगेर्ना गरी राखिएको भुइँमा पल्टिन जान्छन् । उनी पल्टिने क्रममा मेरो दृष्‍टि उनको गुन्द्रिमा पर्छ । घर बाटै साथमा लिएर आएको हुनुपर्छ त्यो गुन्द्री । परालको गुन्द्री । आँफैले बुनेका होलान् शायद । उनको जीवनचर्यामा कुनै न कुनै कर्मको नमूना प्राप्त गर्न सकिन्छ । हात क्रिम लगाएका जस्ता कमला छैनन् । हात खश्रा छन् । त्यो देखेर त उनी मनको चोटले मात्रै गलेको हुनुपर्छ जस्तो अनुभुती हुन्छ । उनकी जहानको अवस्था निकै गम्भिर रहेको छ । शायद कुनै चमत्कारले मात्रै सकुशल घर फर्काउन सक्छ होला । तर ति चमत्कार शायद सिरियलहरु र दन्त्य कथामा मात्रै सिमित हुन्छन् । मलाई पनि कुनै चमत्कार भए देखी ति बुवाको मलिन अनुहारमा केही कान्ती आउने थियो भन्ने लाग्छ । तर कुनै चमत्कार भने भएन । ति बुवाको अनुहार मलिन नै रह्यो । मलिन अनुहारलाई बिदाबारी गर्दा बखतमा मलाई पनि एउटा कबिता स्मरण भएको थियो “ आयो टप्प टिप्यो लाग्यो ....”
खाजा खान उनी सुत्ने ठाउँ हुँदै जाँदै थिएँ । गुन्द्री भित्तामा अडेस लगाएर राखिएको रहेछ । म एक क्षण अडिएँ । त्यो गुन्द्री तिनै बुवाको थियो । के उनले बिर्सेंका हुन् त ? अवस्य उनले बिर्सेंका हैनन् । आफ्नो पौरखले बनेको गुन्द्री थियो त्यो । त्यो उनको उदारपन होला कसैलाई काम लाग्छ भनेर छोडेको हुनुपर्छ । मलाई भने किन हो त्यो भित्तामा ठ्डिरहेको गुन्द्रिले ब्यङ्य गरेको जस्तो प्रतित भयो। भुइमा सुत्नुपर्ने बाध्यताको ब्यङ्य । शारिरिक र मानसिक दुबै रुपले थकित आफन्तजनको कमजोर ब्यबस्थापनाको ब्यङ्य । आफ्नो पौरखले केही नथपी अरुले बनाइदिएको सम्रचनामा यथास्थिती हुने नालायकिपनको ब्यङ्य । हामी सबैप्रति कठोर ब्यङ्य । खै मलाई पीर पर्‍यो । त्यसैले तुरन्तै हटाउन लगाएँ त्यो गुन्द्री । किनभने म सँग त्यो ब्यङ्य सहने शक्ती पनि थिएन । न त ब्यङ्यको जवाफ दिने शक्ति थियो । शायद म त्यो ब्यङ्यको पात्र पनि थिइन ।